Niara-niravoravo nohon’ny fahafahan-dRtoa Ingrid Betancourt ny faritry Amerika iray manontolo · Global Voices teny Malagasy
Niara-niravoravo nohon'ny fahafahan-dRtoa Ingrid Betancourt ny faritry Amerika iray manontolo
Voadika ny 04 Jolay 2008 8:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, বাংলা, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Niara-niravoravo tamin'ny vahoaka Kôlômbiana ny faritry Amerika Atsimo [Latina] iray manontolo raha vao nahare ny vaovao fa Rtoa Ingrid Betancourt sy olona 14 hafa izay nalaina sy notazonina an-keriny no avotra. Rtoa Betancourt, teratany Amerikana 3 sy miaramila Kôlômbiana 11 no indray afaka taorian'ny andram-panavotana nampitondraina ny anarana teti-panorona hoe “Jaque.” Mpiblaogy avy amin'ny firenen-drehetra any Amerika Atsimo no indray miara-miravoravosy mizara ireo fihetseham-pony.
Ekoatera – Cronica Cero manoratra ny lafiny fanoharana [icon, icône] mikasika an-dRtoa Betancourt :
AFAKA. Amin'ny sorabaventy ohatr'izao. (…) Nanjary fanoharana manerana izao tontolo izao Rtoa Betancourt. (…) Nosokafanay ny gazety dia hitanay ny fahafahany, miombom-pifaliana amin'ireo rahalahy sy anabavy Kôlômbiana izahay, ireo indrindra izay nikatsaka ny fandriam-pahalemana talohan'ny fifanoherana. Fanoharana mikasika izay ny ady amin'ny fakana olona an-keriny Rtoa Betancourt ankehitriny. Nifoha amin'ny rivotra vaovao ry zareo Kôlômbiana androany. Ary heveriko ho toy izany koa izao tontolo izao, izay nitatitra ny tantarany sy tohin'izany.
Bolivia – Carlos Gustavo Machicado Salas avy ao amin'ny Guccio's kosa mamakafaka ny fanambarana izay nataon-dRtoa Betancourt dieny izy afaka :
raha ny amiko manokana dia ny fitoriana fitiavana sy famelan-keloka nataon'i Ingrid no lehibe indrindra, ny nilazany fa mivavaka hoan'ireo rehetra nodimandry sy ireo mpiada anaty akata izy, sy ny namotsorany sahady ny helok'izy ireo. Taorian'ny fahasarotana sy ny herisetra izay nosedrainy, dia mety ho nihevitra isika fa fankahalàna sy lolom-po no nameno ny fanahiny, mifanohitra tamin'izany anefa, fahatoniana ara-panahy sy fifikirana mafy mahagaga amin'Andriamanitra, no taratra mamiratra avy ao aminy. Tena zavatra mahagaga loatra izay tokony hisarika antsika tsirairay handini-tena mihitsy izao.
Arzantina – Marian B ao amin'ny Miscellaneous, Nonsensical and Unnecessary Ramblings koa dia manindry mikasika ny fanambaran-dRtoaBetancourt :
Eo am-pihainoana ny kabariny eto amin'ny seranam-piaramanidina aho dia velom-paniriana ireo Kôlômbiana aho ny ahafahany indray miantehitra amina pôlitisiana tsara sy tokana an-tany ary mahatsikaiky toa azy. Tombotsoa lehibe hoan'i Kôlômbia mihitsy raha toa ka mirotsaka ho kandida sy voafidy amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka izy.
Gatemalà – Prensa Negra ravo satria tsy nisy nidiran'ny filoham-pirenena Venezoelana Hugo Chávez ity fanavotana ity :
Tsy misy fihambahambana fa ny fanavotana an-dRtoa Betancourt, vokatry ny fakana an-keriny nataon'ny mpiady anaty akatan'ny FARC no niteraka adihevitra indrindra nandritra izay taona maro lasa izay. Ary mahafinaritra fa tanteraka tsy nisy nitsofotsofohan'i Hugo Chavez izany, raha tsy izany dia efa nieboebo indray eran'izao tontolo izao ny lehilahy !
Però – Menoscanas mikasika izay mety ho fiantraikan'izany amin'ny vondron-tafika mpiady anaty akatan'ny FARC :
Ny tsikitsiky mandravaka ny tavan'ireo olona nohafahana dia mampiharihary fa isan'izay fahavoazana lehibe indrindra nosedrain'ny vondron-tafika mpiady anaty akata FARC hatramin'izay izy ity nohon'ny mason'izao tontolo izao izay voasarika hijery ny zava-misy any Kôlômbia. Ny ohatry Rtoa Ingrid Betancourt no isan'izay mazava indrindra ary ireo tsikitsiky sy orokoroka izay ifampizaran'ireo olona voatana an-keriny nohafahana sy ireo fianakavian'ny tsirairay dia mampiseho fa afaka taitra amin'ny torimaso ihany, na dia tao aorian'ny nofiratsy maharitra aza.
Nanjary fanoharana mikasika ny kapoka karavasy izay nataon'ny FARC ny vahoakan'i Kôlômbia Rtoa Ingrid Betancourt, ary ny fanafahana azy sy ireo olona 14 hafa mpiray fakana an-keriny taminy dia fandresena ara-môraly lehibe hoan'i Kôlômbia.
Paragoay — Edwin Britez ao amin'ny Derecho Viejo [es] wrote about Betancourt earlier in December, and returns with the good news spread throughout the country:
Nankaheritena ahy ny nahita fa nohon'ny fanafahana an-dRtoa Ingrid Betancourt, dia mponina maro no nivoaka tany an-dalambe mba hanambara ny hafaliany amin'ny alalan'ny fampandrenesan'ny fiarakodia. Vehivavy ny maro tamin'izy ireny. Azo ambara fa androany, dia mihoatra ny omaly ny fahafahantsika tsirairay.
Sary tapaka nindramina tamin'i Pixiduc